Wenger oo xaqiijiyay in Lucas Perez uu dib ugu soo laabtay tababarka buuxa ee Arsenal – Gool FM
(London) 25 Nov 2016 Tababaraha kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa xaqiijiyay in weerar yahankiisa Lucas Perez uu dib ugu soo laabtay tababarka buuxa ee kooxdiisa ka hor kulanka Bournemouth ee axada.
Lucas Perez ayaa ku dhaawacmay kulan kooxdiisu ay 2-0 uga adkaatay kooxda Reading ee koobka League Cup-ka bishii hore, maanta ayuuna markale dib ugu soo laabtay tababarka kooxda.
Wenger ayaa meesha ka saaray in Lucas Perez uu ciyaari doono kulanka axada, wuxuuna sheegay inuu fursadiisa heli doono kulanka Southampton ee League Cup-ka.
“Cazorla iyo Bellerin wali waa ay maqanyihiin, ma jiro qof dib noogu soo laabtay” ayuu yiri tababare Wenger ka hor kulanka Bournemouth.
“Lucas Perez ayaa dib ugu soo laabtay tababarka kooxda maanta markii ugu horaysay, waxaa lagayaabaa inuu ciyaaro kulanka arbacada ee League Cup-ka, laakiin hal tababar suurogal kama dhigayo inuu ciyaaro axada”.
"Haddii aan ahaan lahaa James kama tageen Real Madrid" - Zidane oo talo siiyay laacibka reer Colombia